शब्दकोश: रुने 'मान्छे'
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, May 29, 2009
Milan May 29, 2009
सारै लोभलाग्दो लेखाई ... गजलका शेरहरुमा शब्द कुँदे झैँ गरेर हरेक वाक्य सुन्दर रुपमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ | हार्दिक धन्यबाद |
रुने सुबिधा त्यागेर नरुन आँट गर्नु सकारात्मक कुरा हो ... तर अरुलाई चाहिं जागिर ख्वाएर आफ्नो भकुल्ले गालामा खाल्डो बसाउंदा ति साथिलाइ पक्का पाप लाग्छ |
कृष्णपक्ष उज्यालोको खोजिमा May 29, 2009
भन्छन आँसु को मुहान त मन हो रे, मान्छे भित्र यो मन भन्ने चीज कतै छ भने धेरै थोरै पक्कै आँसु खस्दो हो। धाइबा जी त्यसरी च्वात्तै चुडिएर हराएर जाने पनि कहिले काही एकांतमा रुन्छ की? हास्न त हास्दो हो नि दुनियालाइ देखाउन, लोग्ने मान्छेलाइ पक्षपात गरेर खै कुन "मन" नभा पापीले बनाको "रुन हुन्न रे" भन्ने भ्रममा नराम्ररी फसेको पो हो की?
Dilip Acharya May 29, 2009
तपाइको लेखोट र कृष्णजीको टिप्पणी समेत दुबै उत्कृष्ट लागे है मलाई ।
अनी,आँसु नझार्नु र 'नरुनु' भिन्दा भिन्दै कुरा होईनन् र भन्या !
>Jotare Dhaiba< May 29, 2009
यहाँनेर बोलिहाल्न हतार लाग्यो ।
मिलनजीको सकारात्मक सोचसहितको जीवनप्रति मेरो लोभ सुरुदेखिकै हो । पक्कै हो रुने 'सुविधा'मा त को पो तैनाथ हुन चाहला र, सकेसम्म रुन चाहँदैन मान्छे र रुन हुँदैन पनि । नरूनु परोस् । तर मेरो यस लेखोटको झटारो जब्बर मैँ हुँ भन्नेलाई हो, जो नरूनैलाई, आँसु नखसाल्नैलाई सबल भनिटोपल्छ । र तिनमा म मानवताको अंश पनि देख्दिनँ । तिनीहरू झन् बढी रून्छन् जस्तो लाग्छ भित्रभित्रै, जुन आँसु खसाल्नुभन्दा खतरनाक पो हुन्छ कि ? कृष्‍णजीको कुरामा पनि म यहीँनेर मिल्छु ।
अनि दिलीप दाइले पनि सामान्य लाग्ने तर निकै गहिरो कुरा झिक्नुभयो- 'आँसु नझार्नु र नरूनु फरक कुरा होइनन् ?' पक्कै हो दाइ । आँसु झार्नेले मात्र रुँदैनन्, आँसु नझारी पनि रोइन्छ । तर रुवाइको सार्थकता (रूवाइको प्रोत्साहनमा यो सार्थकता प्रयोग गरेको होइन है, खालि गहिराइ र भावनात्मक आवेगको कुरा गर‍ेको ।)आँसु झार्दै रुनुमै छ । तर आम हेराइमा आँसु नझार्नेहरू नरुने मान्छेको पदवी लिएका छन्, सगर्व । बिना अस्त्र बहादुर र वीराङ्गना कहलिएका छन्, गजब लाग्छ ।
तर रुनुलाई दुर्बलता र हुतीहारापनमा पुर्‍याएर कम आँक्ने सामाजिक दृष्टिलाई मेरो शब्दको निशाना ताकिएको हो । खासमा 'रूँदिन, त्यस्तो लुरेलुरी हुइनँ भनेर कसैले फुइँ लगाउनु नै बेकार छ ।
B.J. Dummali May 29, 2009
मानबिय समबेदना रुन मात्रै भयो भने कसो होला यदि त्यसको हल बिनाको रुवाई यसलाई समबेदना भनिन्न होला यसलाई गोहीको आँशु भन्न मिल्छ हैन र धाईबा जी? धेरै राम्रो टाँसो छोड्नु भयो धाईबा जी मलाई त सम्पुर्ण तपाईँको टाँसोहरु ढिलो छिटो पढ्ने गर्छु, के गर्ने धाईबा जी परदेशी जिबन ब्यस्त शहर अनि थकित समयहरु बाट अलिकति फुर्सद निकाल्दा जहिले पनि ढिलो आईपुग्ने गर्छु तपाईँको ब्लगमा धेरै राम्रो छ अझै पनि लेख्दै जानुहोला, धन्यबाद।
दीपक जडित May 29, 2009
कहाँ राख्यौ मलाई देखिँन तिम्रो आँखाको नानीमा
बगाई दियौ कि मलाई त्यही आँखाको पानीमा.....
तिमीलाई आँखामा राखेको छु भनेर रोएर देखाउनेहरुले पनि ल्याउन सक्ने अवस्था पहिले मैले यसरी लेखेको थिएँ गीतमा । तपाईँले त रुँदै नरुनेको निम्ती यति मिठो , यति लामो लेख्नुभएछ । साह्रै मन भरेर पढेँ ।
रुनेहरुले धेरै रोएर धर्म नहुन्जेल रुवाउनेहरुलाई पनि भुकुल्ले गालामा खाल्डो पारुञ्जेल पाप लागी नहालोस भनें है मिलनजी मैले चैं - समय चक्र घुम्दै भोली कता पुग्ला के थाहा ? बरु हुनेसम्म हाँसो र रोदनको योग सँधै सुमधुर बनोस् ।
सिकारु May 30, 2009
संवेदनाको प्रमाणचिन्ह रोदन हुन नसक्ला तर अन्तरत्माको गहिराइमा उठाउने संबेगले सिर्जना गरेको भावनालाई मुहारको लचकतामा प्रष्फुटित
गर्न हाँसो र आँसुलाई साहारा लिएर भौतारिनेहरुको भने कमि छैन है । रुनु पिडा र दुखको साथिमात्रै नभै खुसि र सफलताको भाव पनि हो जस्तो लाग्छ । तर साथिहरुले भने झै आवरणमा ब्लो अप जस्तै चम्किएर पानाहरुमा धमिराले खोतलिरहेको पनि त हुन सक्छ नि? तर म भन्छु जिवनमा कसैको रुवाइलाई हार र हँसाइलाई जितको तिरले हेर्न भने सकिदैन ।
जागिरलाई लत्याएपछि टुटेको तारले छिटै जोडिने मौका पाओस । फेरि त्यहि भ्कुल्ले गालामा फेरि हाँसो देख्न धाइवा जी ।
wordflows May 30, 2009
रुदा मन हलुङ्गो हुन्छ भनेर चित बुझौने बतो जस्तो मात्र लाग्छ। रुएर याधरु मेतिने भए त भईहल्थ्यो नि
Jotare Dhaiba May 31, 2009
पछिल्ला क्रममा मेरा हरफअनुरूप कोमल टिप्पणी दिने हितैषीहरू: दुम्मालीजी, जडितजी, सिकारुजी र दीपजीमा यिनै अक्षरको अभिवादन चढाउँछु ।
दुम्मालीजीले ठीक भन्नुभयो, मानवीय संवेदना रुन मात्र काम लाग्यो भने त्यसको के अर्थ ? समस्याको समाधान नखोजी रोएर बस्ने मान्छे त मान्छे होइन रून्चे प्रजाति हो । तर यस्तो पनि एउटा मान्छेसँग हुनुपर्छ, मेरो यस लेखको आशय यत्ति हो । मान्छेलाई रुन कुनै विशेष फुर्सदकै व्यवस्था गर्नुपर्दैन, होइन र ?
जडितजीको आशय ज्यादे सटीक छ, रुनेहरू भोलि हाँस्लान्, हाँस्नेहरू रोलान् । आलोपालोको खेती न हो मान्छेको जीवनमा हाँसो र रोदन ।
'जागिर' कुनै गुम्तीमा नजोडिई सुखै छैन सिकारुजी । कारण, मान्छेलाई बाँच्न र रमाउन पनि अरूको साथ र मान्यताको जरुरत पर्छ ।
रोएर याद नमेटिए पनि मन हल्का भए त्यही नै काफी हो, आँसुको लाभ हो नि होइन र दीपजी ? तर यादहरू त रहनकै लागि हुन्छन् नि जीवनमा, मेटाउनका लागि त ती हुँदैनन् जरूर ।
Basanta May 31, 2009
रुनु मानवीय स्वभाव हो, नरुनु होईन। रुन जान्नेहरु कोमल हुन्छन् (कोमल हुनु कमजोर हुनु होईन, संवेदनशील हुनु हो), रुवाइलाई कमजोरी ठानेर आफनो मन पिल्साउनेहरुमा कुण्ठा भरिँदै जान्छ र ती विषालु बन्दै जान्छन्।
फेरि, भरी बजारमै रुनुपर्छ भन्ने छैन, एक्लै रुन सकिन्छ या कोहि आत्मीयको सामीप्यमा रुन सकिन्छ। तर निर्विवाद के हो रुन जान्नु राम्रो हो।
तपाईँको सुन्दर लेखनी पढ्न पाऊँदा जहिले पनि आनन्द लाग्छ।
Jotare Dhaiba June 01, 2009
शत: प्रतिशत चित्त बुझ्यो यहाँको कुराले वसन्तज्यू ।
मेरो कोणलाई सही रूपमा खुट्याउनुभएकोमा धेरै खुसी लाग्यो । रुनु अभिभारा र कुनै जागिर नै नभए पनि यसको कमाइ तृप्‍तिमै गएर पोल्टाभरि भरिने खालको हुन्छ, मानवीयताको भावगङ्गाले । रुने गुणले नै मेरो अझैसम्म मेरो मनमैँसँग रहेको छ जस्तो लाग्छ, मान्छे भइरहेछु भन्ने अनुभूति गर्छु । यसैले रूइन्छ सायद ।
दिनेश राज June 02, 2009
धाइबा जीको टाँसो ले मन ढक्ढक्यायो एकचोटी ,म कस्तो मा पर्छु ? कतिपय रुनुपर्ने अवस्थामा पनि दह्रोसँग मनलाई कस्सिनु परेको रहेछ ,तर फर्केर कुनै न कुनै दिन ढिला चाँडो आँसु झर्छनै सधैं नरुनु सकिएला र ?
असाध्यै राम्रो लाग्यो शिर्षक नै , रुने 'मान्छे' यानेकि रुने चाहिँ मान्छे ।
Manbahadur June 02, 2009
mitra, roonoo pida bisaunu pani ho tara yo matrai hoina. so u've to be empowered by yourself. so nice laguage n fantastic presentation.
Let's go forward yar.